स्वास्थ्य बच्चाहरूले खाएनन् खाना ? यो विधि अपनाउनुस् !
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: आजकल मातापितालाई एउटै मात्र गुनासो रहन्छ । बच्चालाई भोकै लाग्दैन । केही खाइदिँदैन । खाना नखाएकाले ऊ कमजोर हुँदै गएको छ ।
बच्चाले नखाइदिनाले मातापिताले तनाव लिने गरेका छन् । अनि आवश्यकताअनुसार स्वस्थ आहार नपाउँदा बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकास हुन पाउँदैन ।
भारतको जयपुरस्थित जेकेलोन अस्पतालमा बाल रोग विशेषज्ञ डा अशोक गुप्ताले यसको समाधान बताएका छन् ।
प्रायः बच्चाहरूलाई भोक लागेन भनेर औषधि दिइन्छ । औषधि खाउन्जेल भोक लाग्छ अनि औषधि छोडेपछि भोक पनि बन्द हुन्छ ।
बच्चालाई ब्रेकफास्ट दिने गर्नुपर्छ । हाम्रो शरीर रातभरि उपवास गर्छ । सुत्नु र उठ्नुका बीच सात घन्टाको ग्याप हुन्छ । यो रातभरिको उपवासलाई सही मेटाबोलिजमतर्फ लग्नुपर्छ । अनि यसका लागि ब्रेकफास्ट आवश्यक हुन्छ । ब्रेकफास्टबाट मेटाबोलिक प्रक्रिया सही तरिकाले सुचारु हुन्छ र बच्चालाई भोक लाग्न थाल्छ ।
बिहान ब्रेकफास्ट नगर्ने बच्चाको भोक कम हुन्छ । त्यसैले पहिले उनीहरूलाई अवश्यै खाजा खुवाउनुस् । यसले मेटाबोलिजम नियन्त्रणमा राख्छ र बच्चालाई भोक लाग्छ ।
बच्चालाई अलिअलि गरी खुवाउनुस् ।
अनि बच्चाले खाएन भनेर दूध त पिइहाल्छ भनी आवश्यकताभन्दा बढी दूध दिँदा एक्सेसिभ मिल्क सिन्ड्रोम हुन्छ र बच्चालाई भोक कम लाग्छ ।
अनि खानापछि फ्रुट डेजर्ट दिँदा पनि बच्चा खानाप्रति आकर्षित हुन्छ । फलफूल खाँदा बच्चाको मेटाबोलिजम राम्रो रहन्छ ।
बच्चालाई फ्याट भएको खानेकुरा दिनुहुँदैन । त्यस्तो खानेकुराले भोक घटाउँछ ।
अनि बच्चाको व्यायाम र शारीरिक गतिविधि बढाउनुस् । टीभी र मोबाइल कम हेर्न दिनुस् । बच्चाको भोक बढाउनका लागि आउटडोर एक्टिभिटी बढाउनुस् ।
बसी बसी खुवाउँदा बोसो बढ्छ । बच्चालाई सही पोषण दिएर राम्रो विकास गराउनुस् ।
तातो वातावरणमा भोक नलाग्ने भएकाले बच्चालाई भान्सामा खाना नखुवाउनुस् । खाना खुवाउने ठाउँमा ताजा हावा आउनुपर्छ । यसले दिमाग शान्त रहन्छ र बच्चाले मन लगाएर खाना खान्छ ।
त्यो तेल जसमा खाना पकाउनु स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा
आलसको तेल, कनोल तेल, नरिवलको तेल, एभोकाडोको तेल, मकैको तेल, जैतुनको तेल, पामोलिन तेल….
सूची निकै लामो छ । खाना पकाउनका लागि तेलका धेरै नै विकल्प छन् । तर कुन तेल स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा राम्रो हो ? खाना र स्वास्थ्यका लागि चिन्ता गर्ने व्यक्तिहरुको मनमा धेरैजसो यो प्रश्न उब्जिरहेको हुन्छ । खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने तेल धेरैजसो त्यसको फल, बोट, बिउ वा दानाबाट तयार हुन्छ । यसलाई दबाएर, प्रोसेस गरेर निकालिन्छ ।
पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडः
तेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको त्यसमा फ्याटको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । यसमा स्याचुरेटेड फ्याट, मोनोस्याचुरेटेड फ्याट र पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड समावेश हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म नरिवलको तेललाई स्वास्थ्यको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो भनिन्थ्यो । कतिले त यसलाई सुपरफूडसम्म पनि भनिदिए । केही मानिसहरुको दाबी थियो कि यो तेल बोसोको रुपमा शरीरमा जम्मान हुने सम्भावना निकै कम थियो । तर हार्वर्ड युनिर्भिटीको एक अनुसन्धानले नरिवलको तेललाई ‘विशुद्ध विष’ घोषणा गरिदियो ।
मानिसको शरीरले धेरै बोसो पचाउन सक्दैन, तसर्थ धेरै बोसो हाम्रो शरीरमा जम्मा हुन थाल्छ । मुटुरोग र रक्तचाप जस्ता स्वास्थ्य समस्या पैदा हुन्छ । बेलायतमा सरकारको गाइडलाइनले कुनै पुरुषले दिनभरी तीस ग्राम र महिलाले बीस ग्रामभन्दा बढी तेल खान नहुने बताएको छ । यसको कारण पनि बुझ्नुहोस् । तेलमा जुन फ्याट हुन्छ, त्यो फ्याटी एसिडको कणसँग मिलेर बन्छ । यो फ्याटी एसिड कि त सिंगल बन्डसँग जोडिएको हुन्छ जसलाई स्याचुरेटेड फ्याट भनिन्छ ।
रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्राः
अथवा डबल बोन्डसँग जोडिएको हुन्छ जसलाई अनस्याचुरेटेड फ्याट भनिन्छ, जुन फ्याटी एसिडको सानो श्रृङ्खलामा बाँधिएको हुन्छ, त्यो रगतमा प्रत्यक्ष रुपमा घुल्ने गर्छ । र शरीरको ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूरा गर्छ । तर लामो चेन भएको फ्याटी एसिड सिधा कलेजोमा जान्छ । यसरी हाम्रो रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्ने गर्छ । नरिवलको तेलको विषयमा भएको अध्ययनले यसले हाम्रो शरीरमा लो डन्सिटी लिपोप्रोटिन (एलडीएल) को मात्रा बढाउने पत्ता लागेको छ । एलडीएलको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हाम्रो मुटुको गतिसँग भएको पाइयो । यद्यपि, नरिवलको तेलबाट हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन (एचडिएल) पनि पाइन्छ जसले रगतबाट एलडीएललाई खोस्ने गर्छ ।
फ्याटी एसिड र भिटामिनः
भर्जिनियाको जर्ज म्यासन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक टेलर वालेस भन्छन्, ‘एचडीएलमा लोरिक एसिड नामको रसायन हुन्छ जसलाई सी१२ फ्याटी एसिड भनिन्छ । यो लामो चेन भएको फ्याटी एसिड हो जुन कलेजोमा जम्मा हुन्छ । यसले स्वास्थ्यमा सस्या पैदा हुन्छ ।’ त्यसकारण जानकारका अनुसार जुन तेलमा स्याचुरेटेड फ्याटको मात्रा कम हुन्छ त्यसले खाना राम्रो हुन्छ । त्यसैले यो कम मात्रामा नै खानुपर्छ । पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याट र ओमेगा – थ्री, सिक्स फ्याट भएको खाना राम्रो हुन्छ । यसले रगतमा कोलेस्ट्रोलको स्तर कम हुन्छ । र शरीरले आवश्यक फ्याटी एसिड र भिटामिन पाउने गर्छ ।
पोलिअनस्याचुरेटेड र मोनोस्याचुरेटेड फ्याट भएको फ्याटी एसिड थुप्रै तेलमा पाइन्छ । यसको मात्रा बोट र तेल निकाल्ने प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ । एक अनुसन्धानमा ओलिभ ओयलको अत्यधिक प्रयोगले मुटुरोगको आशंकालाई पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कम गरिदिन्छ । हार्वर्ड युनिर्भिटीको टिएच चेन स्कूल अफ पब्लिक हेल्थको वैज्ञानिक मार्टा गोश फेरेले २४ वर्षसम्म एक लाख व्यक्तिमाथि एक अनुसन्धान गरे । उक्त अनुसन्धानमा जो यस्तो प्रकारको ओलिभ ओयलको प्रयोग बढी गर्छन्, उनीहरुमा मुटुरोगको आशंका १५ प्रतिशतसम्म काम हुने पत्ता लाग्यो ।
जैतूनको तेलको फाइदाको ठूलो कारण त्यमा पाइने मोनोस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड हो । यसमा भिटामिन, मिनरल्स, पेलिफेनोल्स र बोटमा पाइने अन्य माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स हुन्छन् । मार्टाका अनुसार ओलिभ ओयलको प्रयोग गर्दा हाम्रो खानासँग जोडिएका अन्य हानिकारक फ्याटी एसिडबाट पनि छुटकारा पाइन्छ |जैतूनलाई फोडेर त्यसको गुदीबाट ओलिभ ओइल निकालिन्छ । यसलाई सबैभन्दा स्वस्थवद्र्धक तेल भनिन्छ । यो हाम्रो पेटमा पाइने ब्याक्टेरियाका लागि राम्रो हुन्छ । यसले मुटुरोगलाई कम गर्ने पनि बताइन्छ । जैतुनको तेल खाँदा क्यान्सर र मधुमेहबाट बच्ने पनि दाबी गरिन्छ ।
मेडिटेरेनियन डाइटको महत्वपूर्ण हिस्साः
स्पेनको भ्यालेन्सिया युनिभर्सिटीका प्राध्यापक फ्रान्सिस्को बार्बा भन्छन्, ‘जैतूनको तेलमा पाइने फ्याटी एसिड र अन्य तत्वले हामीलाई असंक्रमित रोगबाट पनि बचाउँछ । किनभने यसमा ती तत्व हुन्छ जुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्छ ।’ भूमध्य सागर वरिपरि बस्ने मानिसहरु ओलिभ ओयलको अत्यधिक प्रयोग गर्छन् । यसलाई मेडिटेरेनियन डाइटको अटूट हिस्सा भनिन्छ । र मेडिटेरेनियन डाइटलाई विश्वको सबैभन्दा स्वस्थ डाइट मानिन्छ । केही वैज्ञानिकले यो डाइड स्वस्थ हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण जैतूनको तेल समावेश भएकै कारण भएको बताइन्छ । तर मार्टाका अनुसार संसारका अन्य इलाकाको तुलनामा भूमध्य सागर वरिपरिको खानपानमा नट्स हुन्छन्, फलफूल र सागसब्जीको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । तसर्थ स्वास्थ्यसको हिसाबले मेडिटेरेनियन डाइट राम्रो हुनुको पछाडि जैतूनको तेलमात्रै नभई पूरा खानपिन हो ।
तेल कमै खानु ठिकः
अनुसन्धानकर्ताले अन्य क्षेत्रको तुलनामा भूमध्य सागरीय क्षेत्रको खान्कीले रगतमा ग्लूकोजको स्तर कम हुने पत्ता लागेको छ । केही मानिसहरुले एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइल लिनु थप फाइदाजनक भएको दाबी गरेका छन् । तर स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार यसमा एन्टी अक्सिडेन्ट र भिटामिन ईको मात्रा अत्यधिक भएपनि यो निकै कम तापक्रममा तातो हुने भएकोले यो तेलको थुप्रै पौष्टिक तत्व तातो हुँदा नष्ट हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा काँचो तेल खाँदा मात्रै स्वास्थ्यका लागि फाइदा हुन्छ । यद्यपि, तेल जुनसुकै होस्, कम मात्रामा खानु नै ठिक हो ।
कोरोनाकालमा एक सकारात्मक कुरा पुरै विश्वले देखेको छ । यो अवधिमा सडकमा सवारी नचलेको र कारखाना पनि बन्द भएको थियो ।
एक चम्चा बेसार दूधमा हालेर पिउँदा शरीरलाई हुने ८ फाइदा
बेसार हालेको दूध पिउँदा शरीरलाई विभिन्न प्रकारका फाइदाहरु पुग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । कोरोना भाइरसको महामारीमा यसको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउन मद्दत गर्छ । करक्युमिन एन्टिअक्सिडेन्टले भरपूर बेसार दूधमा हालेर पिउँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न लाभ पुग्छ ।
रोज’गारी गु’मेका नेपालीहरूका लागी कता’रबाट आ’यो अहिले सम्म’कै खु’शी’को ख’बर
कतारमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनु नपर्ने भएको छ ।कतार सरकारले बेरोजगार श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति ल्याएपछि उनीहरूले पुनः रोजगारको मौका पाउने भएका हुन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ श्रमिकको अभाव भएपछि कतारले यस्तो नीति ल्याएको हो ।